Iflethi entle eCabo Branco - I-Airbnb
Iflethi entle eCabo Branco
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMariana
Indawo enkulu, ecaleni bar Cuscuz, kufutshane elwandle (110m), imivalo eziliqela kunye zokutyela, iivenkile, Cabo Branco Station (4.7 Km), Cabo Branco Lighthouse (4.8 Km) kunye Centre of Iindibano João Pessoa (11 Km) .
Indawo epholileyo, enebhedi ephindwe kabini kunye nebhedi yesofa (ilala ezimbini), iTV, isitovu, ifriji, umenzi wekofu, i-blender, umenzi wesandwich, iimbiza, iipleyiti, i-cutlery, iikomityi, iiglasi, iitawuli, amashiti kunye neeragi.
Indawo yaseCabo Branco yenye yezona ndawo zifunwa kakhulu eJoão Pessoa Ifumaneka kwimpuma yelizwe, ikufutshane nempuma yeMelika, iPonta do Seixas. Inokhetho oluninzi lweendawo zokutyela kunye nemivalo. Umphetho wayo usetyenziswa ngokubanzi ukwenza umthambo, kwaye le ndlela ivalwa yonke imihla ukusuka ngo-5:00 kusasa ukuya ku-8:00 kusasa.
Unxibelelwano lunokwenziwa ngencoko kwisiza, WhatsApp okanye umnxeba, njengoko ukhetha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cabo Branco